China Outdoor double side front service waterproof cabinet factory နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Ruichen
အပြင်ဘက်နှစ်ထပ်ခြမ်း ၀ န်ဆောင်မှုရေစိုခံကက်ဘိနက်
1.Cabinet အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား
2. မော်ဒယ်အရွယ်အစား: 320*160mm 192*192mm 256*128mm
3.Cabinet အရောင်: အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်၊ မီးခိုးရောင်
၄။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - နံရံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ၎င်းသည်အစိုးရအဖွဲ့၏နောက်ဘက်တွင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသောအခြေအနေနှင့်လိုက်ဖက်သည်
7. အပိုပစ္စည်း: ပါဝါပန်းကန်၊ လက်ခံရရှိသောပန်းကန်
Module အရွယ်အစား 320*160 mm, 192*192mm, 256*128mm
ယခင်: ၉၆၀ × ၉၆၀ အဆင့်မြင့်သံရေစိုခံသေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: Outdoor pole light တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ထားသောကက်ဘိနက်
Outdoor pole light တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ထားသောကက်ဘိနက်